AMISOM oo ka hadashay howlgalkii Wadajir & Debadbax ka dhacay Muqdisho – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: War saxaafadeed kasoo baxay howlgalka AMISOM ayaa lagu faafaahiyay dagaal saaka ka dhacay Degmada Wadajir kaaasi oo dhaxmaray Ciidamada Dowladda iyo kuwa AMISOM iyo Maleeshiyo daacad u ah Gudoomiyihii hore ee Degmadaasi Axmed Daaci.
AMISOM ayaa ayaa sheegeysa in intii uu socday dagaalkii saaka ay kusoo qabteen 20-kamid ah Askartii dagaalka kala hortimid sidoo kalena ay la wareegeen Hub ay kamid yihiin 15-qori oo ah kuwa fud fudud iyo Saanad Milatari.
7-dii August 2014, Golaha Wasiirada Somaaliya ayaa meelmariyay qorshaha xakameynta hubka waxaana markaasi kadib soo badanaya talaaboyinka Ciidamada Dowladdu ay hubka uga dhigayaan shaqsiyaadka ka madax banaan Dowladda.
Dhanka kale, waxaa manta debadbax looga horjeeda weerarkas lagu qaaday Axmed Daaci iyo C/laahi Sheekh Xasan ka dhacay degmada Kaaraan.
Dad careysan oo taageesan labadaas siyaasi ayaa isugu soo baxay banaanka hore ee xarrunta maamulka degmada Kaaraan, waxaana halkaas dadku ku gubeen taayaro.
Ciidamada booliska ayaa la sheegay iney rasaas ku kala ceyriyeen dadka, iyadoo wararka qaar sheegayaan inuu jiro khasaare dadkaas soo gaaray.